Samsung Cloud ga-ebelata ohere nchekwa n'efu site na 15 ruo 5 GB | Gam akporosis
Ụlọ Ignatius | | Samsung
Ọrụ nchekwa igwe ojii abụrụla ụzọ kachasị adaba iji chekwaa ozi niile anyị nwere mmasị mgbe niile ịnwe n'otu ebe. Microsoft, Google, Dropbox ... dị iche iche bụ nhọrọ anyị nwere n'aka anyị ma a bịa nkwekọrịta nkwekọrịta gafee ihe ha na-enye anyị n'efu.
Agbanyeghị, ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị maka iji ọrụ nchekwa dị na ngwaọrụ mkpanaka anyị, nke bụ ihe anyị na-eji maka ihe niile. Samsung na-enye anyị ohere 15 GB maka anyị iji chekwaa akwụkwọ nke ngwa, data yana ọbụlagodi foto na vidiyo anyị. O di nwute na oghere ga-ebelata ka nke June 1.
Nke ahụ ee, ọ bụ etu a ka ọ dị Ọ ga-emetụta ndị ọrụ ahụ niile mepụtara akaụntụ Samsung mgbe May 31 gasịrị. Ndị ọrụ ahụ niile nwere akaụntụ 15 GB ga-anọgide na-edebe ebe nchekwa a. O yikarịrị ka mgbanwe Samsung na nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe bụ ndị ọrụ na-ejighị iji 15 GB na ọnụ ha.
Ihe kpatara ya abụghị onye ọzọ karịa ebe nchekwa. 15GB pere mpe iji kwado foto na vidiyo gị niile na anyị ga-eji ọdụ anyị. Site na 5 GB, anyị nwere ohere zuru oke iji chekwaa ihe ndị kachasị mkpa nke ọdụ anyị dị ka ndabere, nhazi.
Na mgbakwunye, ekele maka Foto Google, ebe anyị nwere ohere nchekwa nchekwa dị elu n'efu maka foto na vidiyo, were ọrụ ọrụ nchekwa Samsung. ọ nwere ike ọ gaghị abara anyị uru, belụsọ na usoro obibi anyị niile mejupụtara ọnụ site na ndị na-emepụta Korea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Cloud ga-ebelata ebe nchekwa n'efu na 15 GB na 5 GB
Vivo Z5x: Ekwentị mbụ nke ika ahụ nwere oghere na ihuenyo ahụ